Ukuphakama komndilili kunye nobunzima kulutsha - Ulutsha Impilo
Ukuphakama komndilili kunye nobunzima kulutsha
Njengokuba kukho izinto ezininzi ezimisela ubunzima bomntu omdala, zininzi izinto ezibonisa ubunzima bomndilili ophakathi. Isini, ukwakha kunye nobudala bayo yonke into kwi-equation. Kuba imizimba yabakwishumi elivisayo isakhula, ubunzima obuphakathi kunye nokuphakama komntu ofikisayo kunokutshintsha kancinci ukusuka kunyaka omnye kuye kolandelayo, ekugqibeleni kuzinze malunga neminyaka eli-18 ukuya kwengama-20 ubudala.
ukucoca izitovu zerhasi ngeviniga
Buyintoni na umndilili wokuphakama nobunzima komntwana ofikisayo?
Okokugqibela, ubunzima bomntwana okwishumi elivisayo obunobungakanani kumyinge wokuphakama kuxhomekeke kwizinto ezininzi. Ayisiyonto ilula njengokuwela kuluhlu olufanelekileyo lweetshathi. Yintoni ubunzima obufanelekileyo obuya kusekelwa:
Ipesenti yamanqatha omzimba
Igalari yaBafana yaBafikisayo kwiZimbo zeFashoni
Izimvo zokulala zaMantombazana aBantwana aBafikisayo
Igalari yeFashoni yoLutsha yaBaselula
Inkwenkwe ekwishumi elivisayo enomzimba omkhulu enethoni enkulu yemisipha inokuba nobunzima ngokulula ngaphezulu komndilili kumgangatho ophakathi ophakathi kunye netshathi yobunzima. Oku kubangelwa ikakhulu kukuba iiseli zemisipha zinobunzima obungaphezulu kweeseli ezinamanqatha.
Ukuqonda Umndilili woBude kunye nobunzima baMakhwenkwe alishumi elivisayo
Ukuba nesiphatho kwi ubude obuphakathi kunye nobunzima kulutsha Inkwenkwe inokukunika ulwazi oluninzi oluncedo. Nangona ubunzima bakho kunye nokuphakama kungasetyenziswanga ukufumanisa nantoni na, ukuqonda apho uwela khona ngokwemiba yezi zinto kunokunika ugqirha ulwazi oluthe kratya malunga nezinye izinto onokuthi ube nazo malunga nempilo yakho kunye nokuba sempilweni.
Ukuphakama kunye nobunzima baMakhwenkwe alishumi elivisayo
Uluhlu lweminyaka Ukuphakama Ubunzima Ipesenti
Iminyaka 12-13 I-intshi ezingama-58-62 Iilitha ezingama-85-100. Amashumi amahlanu%
Iminyaka eli-14-15 63-66 intshi Iilitha ezingama-105-125. Amashumi amahlanu%
16-17 iminyaka 67-70 intshi Iilitha ezili-130-150. Amashumi amahlanu%
Iminyaka eli-18-20 68-70 intshi Iilitha ezingama-150-160. Amashumi amahlanu%
Ukwazi uMndilili woBude kunye nobunzima baMantombazana oLutsha
Ubungakanani obuphakathi kunye nobunzima kumantombazana okwishumi elivisayo kuya kuxhomekeka kwizinto ezininzi kwaye akuqhelekanga kumazwe ahlukeneyo kunye neenkcubeko ukuba zahluke kakhulu. Njengamakhwenkwe akwishumi elivisayo, ukwazi ukuphakama okuphakathi kunye nobunzima kunokubonelela ngolwazi oluncedo, kodwa akufuneki kusetyenziswe njengesixhobo sokuqonda isifo.
Ukuphakama komndilili kunye nobunzima bamantombazana afikisayo
Iminyaka 12-13 60-63 intshi Iiplani ezingama-95-105. Amashumi amahlanu%
Iminyaka eli-14-15 63-64 intshi Iilitha ezili-105-115. Amashumi amahlanu%
16-17 iminyaka Iintshi ezingama-64 Iilitha ezili-115-120. Amashumi amahlanu%
Iminyaka eli-18-20 Iintshi ezingama-64 Iiplani ezingama-125-130. Amashumi amahlanu%
Umndilili wobunzima xa kuthelekiswa neBMI
Ngenxa yoku, umlinganiso oqhelekileyo oqhelekileyo wemizimba esempilweni usekwe kwifomula eyaziwa ngokuba yi-Body Mass Index okanyeBMI. (Ifomula ye-BMI = ubunzima bakho buhlukaniswe ngokobude obuphindwe kabini). Inkqubo ye- Iziko Lolawulo Lwesifo icebisa ukusetyenziswaIsibali BMIUkujonga ukukhuluphala, ukutyeba kakhulu, ukutyeba, kunye nobunzima obusempilweni. Nangona kunjalo, indawo ithi, 'i-BMI ayisosixhobo sokuchonga.' Nokuba ulutsha lune-BMI ephezulu, umboneleli wezempilo uya kwenza ezinye iimvavanyo zokuqonda ukuba ulutsha lutyebile na.
Iwijethi ye-BMI Calculator
Ufuna ukwazi apho uwe khona? Bala ubungakanani bomzimba wakho usebenzisa iwijethi ephathekayo engentla.
Khetha phakathi kwesiko laseMelika (iiponti, iinyawo kunye nee-intshi) okanye i-metric (iikhilogram, iimitha kunye neesentimitha) iiyunithi zomlinganiselo.
Chwetheza ubunzima bakho kunye nokuphakama kumacandelo ahambelana nawo.
Cofa kwindawo ethi 'Bala' ukubonisa i-BMI yakho.
Cofa iqhosha elithi 'Cacisa iZiphumo' ukwenza ubalo olutsha.
Sebenzisa iitshathi ezingezantsi nge Uluhlu lweBMI lwabantwana ukubona apho iziphumo zakho ziwela khona.
Iziphumo zeBMI zaMakhwenkwe
Ukuqonda BMI yamakhwenkwe ingakunika ulwazi oluluncedo lokuxoxa nogqirha wakho, ngakumbi ukuba unezinto ezixhalabisayo.
13 15.2 okanye ngaphantsi 15.3-21.5 21.6-25 25.1 nangaphezulu
14 15.9 okanye ngaphantsi 16-23.5 23.6-25.9 26 nangaphezulu
Shumi elinantlanu 16.6 okanye ngaphantsi 16.7-23.3 23.4-26.7 26.8 nangaphezulu
16 17.2 okanye ngaphantsi 17.3-24.1 24.2-27.4 27.5 nangaphezulu
17 17.6 okanye ngaphantsi 17.7-24.8 25-28.1 28.2 nangaphezulu
18 18.1 okanye ngaphantsi 18.2-25.5 25.6-28.8 28.9 nangaphezulu
19 18.6 okanye ngaphantsi 18.7-26.2 26.3-29.8 29.7 nangaphezulu
Iziphumo zeBMI zaMantombazana
Ukuqonda ukuba yintoni umndilili I-BMI yamantombazana kwaye ukubala ukuba yeyiphi na into yakho kunokuba lulwazi olunokuba luncedo ukuze uthethe nogqirha wakho malunga. Banokukubalela yona ngexesha lokujonga kwakho unyaka nonyaka.
13 15.2 okanye ngaphantsi 15.3-22.5 22.6-26.2 26.3 nangaphezulu
14 15.7 okanye ngaphantsi 15.8-23.2 23.3-27.1 27.2 nangaphezulu
Shumi elinantlanu 16.2 okanye ngaphantsi 16.3-23.9 24-28 28.1 nangaphezulu
16 16.7 okanye ngaphantsi 16.8-25.5 25.6-28.8 28.9 nangaphezulu
17 17.1 okanye ngaphantsi 17.2-25.1 25.2-29.5 29.6 nangaphezulu
18 17.4 okanye ngaphantsi 17.5-25.6 25.7-30.2 30.3 nangaphezulu
19 17.7 okanye ngaphantsi 17.8-26 26.1-30.9 31 nangaphezulu
Amanqanaba okukhula kunye neeMviwo zoMzimba
Enye into ebalulekileyo kukukhula kwenqanaba. Oku kwahlukile kubantwana nakwishumi elivisayo, njengoko i-BMI yabo, ubude, kunye nobunzima buya kutshintsha njengoko imizimba yabo ikhula. Esi sesinye sezizathu zokuba imilinganiselo yabantu abadala mayingaze isetyenziselwe ukuvavanya ulutsha. Ekugqibeleni, olona vavanyo lubalaseleyo lolwenziwe ngugqirha wabantwana. Kuvavanyo ngalunye lomzimba, ubude kunye nobunzima kufuneka bulinganiswe, kulandelwe inkqubela phambili kwitshathi nganye. Esi sikrini sezempilo ngokubanzi siyacetyiswa rhoqo kwiminyaka emibini kulutsha, abaneminyaka eli-11 ukuya kwengama-24 ubudala.
AmaBhunga oLutsha aHlangayo
Imizimba yolutsha ichaphazeleka kakhulu kukufikisa. Njani? Ngelixa iitshathi ezingentla zibonisa ubungakanani obuphakathi kunye nobunzima kulutsha, kuninzi kakhulu kweli bali. Oogqirha babantwana baneigrafu ezinokuphakama, ubunzima kunye nee-BMIs zeminyaka nganye kunye neepesenti. Ukuba umntwana wakho okwishumi elivisayo ukude kule tshathi, utyelelo kugqirha wakho linyathelo elilandelayo. Oogqirha babantwana babona imizimba yolutsha emininzi, kwaye ke, banombulelo osempilweni kakhulu malunga nento 'eqhelekileyo'.
IiHormone ziya kuqala ukutshintsha ubume bomzimba. Ke, nangona ukukhula okuqhelekileyo kusenzeka, umzimba wolutsha uya kuqala ukubonakala wahlukile. Olu tshintsho lunokukhathaza umntu ofikisayo, njengoko bephulukana nemizimba yabo ethe tye kwaye emxinwa efana neyomntwana. Amantombazana akhathazekile malunga neengqungquthela kwaye abafana banenkxalabo malunga nokujonga okuqinileyo kunye nobudoda. Rhoqo, ubude boqobo kunye nobunzima benza umahluko omncinci.
Bonke abantwana abakwishumi elivisayo bahamba nexesha, elihlala malunga neminyaka emibini, lokukhula ngokukhawuleza ngokukhawuleza. Ngaphambi kokuba kwenzeke oku, umzimba unokubonakala unzima. Emva kokukhula kokukhula, umzimba uqala ukwanda, ubonakale ubhityile. Kumantombazana, eli xesha lokukhula lidla ngokwenzeka kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-10 ukuya kweli-14. Kumakhwenkwe, kamva, ihlala ineminyaka eli-12 ukuya kweli-16 ubudala.
Ipesenti yamanqatha omzimba wentombazana iya kukhula ngokwendalo kwaye nenkwenkwe iya kuncipha. Imfuza idlala indima enkulu ekubeni konke oku kuphuma njani.
Kubalulekile ukuba uthethe nolutsha lwakho malunga nomzimba kunye nobunzima. Bazise ukuba, akunakwenzeka ukuba uze nobunzima obulungele wonke umntu kwaye ubafundise ukuba bayixabise kwaye bayikhathalele imizimba yabo. Sukuthetha ngamanqatha xa uthelekiswa namanqatha, thetha ngento esempilweni.
Uziva kwaye ujongeka ulungile
Nokuba uloyiko lwakho lubangelwe kukugqithisa okanye ukutyeba, kwiimeko ezininzi imeko kulula ukuyilungisa ngendlela efanelekileyo yokutya kunye nesondlo. Izinto ezimbalwa zokuzama ukufikelela kunye nokugcina ubunzima bakho obufanelekileyo kubandakanya:
Ukutya ukutya okunesondlo kunokujonga iikhalori, ngakumbi xa umncinci kwaye ukhula
Ukugcina umthambo ngokwaneleyo
Ukuphuhlisa imikhwa yokutya elungileyo, kubandakanya ukutya okunezondlo kunye nokutya okulula kunye nokugcina ukutya okunamafutha okuphezulu kunyango ngamanye amaxesha, kunye nomsebenzi oqhelekileyo
Xa uziva ulungile, ujongeka ulungile, ke gxila kwimpilo kunamanani.
Ukujongana neenkxalabo noGqirha wakho
Ukuba unenkxalabo malunga nokuphakama kwakho okanye ubunzima bakho, nceda ujonge oku kunye nogqirha wakho oyintloko. Ugqirha unokujongana nazo zonke iinkxalabo zakho ngokusekwe kwimbali yakho yezonyango, ubudala, ukuphakama kwangoku kunye nobunzima.
Ulwazi oluqulethwe kweli nqaku lusekwe kwimilinganiselo yangoku yamantombazana namakhwenkwe akwinqanaba elithile lobudala.Abantu banokuba nobunzimangaphezulu okanye ngaphantsi kunoko kudweliswe kwezi tshathi zingasentla.
Ikrisimesi Imiboniso Yesilayidi Ukuqhuba Tips Iziporho Ukupheka Iiherbs Iincwadi Zescrapbook Themes
Imali Kunye Izemali
Nguwuphi umbala we-sally ovela kubusuku obubi ngaphambi kwekrisimesi
Isoftware yamakhadi emibuliso yasimahla yeewindows 10
Indlela yokubhala isibheno soncedo lwezezimali
lithini ixabiso lebhili eyi- $ 2
ukucoca isilivere ngefoyile
Idayimane yedayimane enamatye asecaleni